Filtrer les éléments par date : vendredi, 08 novembre 2019
vendredi, 08 novembre 2019 22:36
Le conseil du gouvernement qui s’est tenu au Palais d’Etat de Mahazoarivo ce mercredi 06 novembre 2019 a donné un accord pour la sortie de la 2ème liste des exportateurs de vanille agréés pour la campagne 2019-2020.
vendredi, 08 novembre 2019 22:30
Finoana Katolika: Hotokanana ny Katedraly vaovao aty Namahora Morondava
Hatao ny Alahady 10 novambra izao ny fitokanana ny Katedraly vaovao aty Namahora Morondava.
Hitarika ny lamesa ho amin’izany ny Kardinaly Désiré Tsarahazana sy Mgr Paolo Gualteri solontenan’i Papa Ray Masina, hotronin’ireo Eveka maro eto Madagasikara.
vendredi, 08 novembre 2019 22:19
Donakafon'Analakely: Niady ny tombontsoany ny mpiasan’ny CUA
Notanterahina tetsy amin’ny lapan’ny tanàna Analakely Antananarivo androany zoma 08 novambra 2019 tolakandro ny "Donakafon'Analakely", adihevitra teo amin’ny Mpiasan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra sy ireo kandida ho Ben'ny Tanàna, dia Ralaiarimanana Eliace (Tsy miankina), Rina Randriamasinoro (TIM), Rakotoarisoa Faniry Alban (APM), Naina Andriantsitohaina (IRK) ary Feno Harison (Tsy miankina).
Voaresaka tamin’izany ny ho fitantanana ny tanàna, ny fifandraisana amin’ny governemanta. Niady izay ho tombontsoan’ny mpiasa ihany koa ireto farany, tamin’ireo kandida izay ho lasa Ben’ny tanàna ny iray amin’izy ireo.
vendredi, 08 novembre 2019 22:03
Fanafihana mitam-basy: Maty notifirin’ny jiolahy i Zafindrafidy Hamad, Ben’ny tanànan’Antsiranambe
Fira famaky sy tifitra basy teo amin’ny tendany no nahafaty an-dRakotonirina Zafindrafidy Hamad, nandritra ny fanafihana mitam-basy nitranga ny alin’ny alakamisy hifoha ity zoma 8 novambra ity, nanodidina ny misasakalina. Tao amin’ny Fokontany Ambalanomby, Kaominina ambonivohitr’i Farafangana no nisehoan’ity vono olona ity.
Ben’ny tanàna amperinasa ao amin’ny Kaominina ambanivohitra Antsiranambe, Distrikan’i Farafangana i Rakotonirina Zafindrafidy Hamad. Tsy isan’ireo kandida nirotsaka hofidiana amin’ny fifidianana hatao amin’ny 27 novambra 2019 ho avy izao intsony izy. Hamita iraka no niakarany teto Farafangana, niaraka tamin’ny vady aman-janany, no izao niharan’ny herisetra nitarika tamin’ny fahafatesany izao.
vendredi, 08 novembre 2019 21:28
Andranomanalina Isotry: Tsy mandry fahalemana
Jiolahy mitam-basy miisa efatra no nanafika olo-tsotra nitondra versement patte jaune, ka nitifitra avy hatrany ny nanandrify ny fon'ity tovolahy iray, izay niaro ny sac banane nisy ilay vola teny aminy. Antsoina amin’ny anarana hoe Naivo ity tovolahy ity ary mipetraka eny Andranomanalina Isotry.
Teny amin’ny tetezan’ny bekiraro io hariva io tokony ho tamin’ny fito latsaka fahefany teo no nitrangan'ny fanafihana.
Maty tsy tra-drano moa i Naivo, ary nivoaka tao an-damosiny ny bala izay notifiran’ireo jiolahy azy, avy eo dia nanao tifi-danitra ireo jiolahy mba hiparitahin’ireo olona manodidina.
vendredi, 08 novembre 2019 21:22
Création d’une fondation: Le Président de la République demande une précision sur un Avis de la HCC
Le Président de la République saisit le Haute Cour Constitutionnelle en demandant la précision de la Cour sur l’article 3 de l’Avis n°09-HCC/AV du 20 septembre 2019 relatif à une demande d’avis sur la conformité de la création d’une fondation avec l’article 49 de la Constitution.
Avis n°09-HCC/AV du 20 septembre 2019:
vendredi, 08 novembre 2019 19:25
Governoran’ny Faritra: Naka ny hevitry ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny filohan’ny Antenimierandoholona
Nandefa taratasy any amin’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana ny filohan’ny Antenimierandoholona, Rakotovao Rivo, mangataka ny heviny raha toa ka mifanaraka amin’ny Lalampanorenana na tsia ny didim-panjakana 2019-1866 tamin’ny 25 septambra 2019 mikasika ny Governora.
Androany 08 novambra 2019 no voarakitra ao amin’ny firaketan’ny Fitsarana avo momba ny Lalampanorenana io taratasy fangatahana io.
vendredi, 08 novembre 2019 19:23
Fisavana fiara tamin’ny RN7: 23 tsy tokony hifamoivoy, 2 nampidirina ambalam-pamonjana
Manohy hetsika fidinana ifotony an-dalambe ny ekipan'ny « Service des opérations et contrôles routiers ». Tany Andohanilakaka, amin’ny lalam-pirenena faha-7, izy ireo ny 07 novambra 2019.
Fiara niisa 52 no nanaovana fitsirihana ifotony teo anelanelan’ny tamin’ny 09 ora maraina hatramin’ny 05 ora sy sasany folakandro. Fiara 23 tsy ara-dalàna, ka 16 amin’ireo dia patsitsika (ratsy sy mandratra), 02 nampidirina ambalam-pamonjana noho ny fahalanian'ny paikandro fitsirihana ara-teknika na « visite technique expirée ». Teo koa ny tsy fahatomombanana ara-teknika tsikaritra toy ny faharatsiana ivelany sy anatiny.
vendredi, 08 novembre 2019 16:41
Ivato-Ambohidratrimo: Mpanohana ny Kandidà Penjy Randrianarisoa tapa-tanana niharan’ny herisetra
Niharan’ny herisetra ny mpanohana an’i Penjy Randrianarisoa, Kandida Ben’ny tanàna Tiako i Madagasikara ao Ivato, Distrika Ambohidratrimo.
Avy nametaka afisy no voalaza niharan’ny hetraketraka ka tapaka ny tanany. Tsaboina ao amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha izy amin’izao.
vendredi, 08 novembre 2019 16:37
« Robotex Armenia 2019 »: Tsy lasa ny solontena Malagasy noho ny olana ara-bola
Niomana i Madagasikara hifaninana amin’ny Robotex Armenia 2019 : International Robotics Contest, fifaninanana iraisam-pirenena amin’ny robot.
Tokony nanainga omaly hariva niazo an’i Arménie ny ekipa malagasy « Girls Robotika Madagascar » nahitana an’i Ravololonantenaina Misa, Landy Tiana, Razanakoto Lorie ary Rasamimanana Mickaella, izay saika hiatrika ny fanamby « Robotex Armenia 2019 ». Tsy tanteraka anefa izany, hoy ny STEM4Good namolavola azy ireo, noho ny olana ara-bola, na teo aza ireo malalatanana vitsivitsy.
Tsy hijanona eo ny tantaran'izy dimy vavy, ary tsy ho very maina ny ezaka lehibe natao, ny fiaretan-tory sy ny fitotototoana hitady mpanohana efa ho roa volana izay, fa hatao izay hahatafiditra azy ireo amin'ny fanamby Robotex manaraka, hoy ny STEM4Good.